सरोकारवालाहरु सावधानी अपनाउ - Jay Loktantra
Home सम्पादकीय सरोकारवालाहरु सावधानी अपनाउ
सरोकारवालाहरु सावधानी अपनाउ
२०७७ आश्विन ७, बुधबार २०:४५
कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को सन्त्रास बढेपछि छ महिना लामो समयदेखि बन्द रहेको सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिएसँगै यसको जोखिम झन् बढेर जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । आवश्यक स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कोचाकोच भरिएका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्नेहरुबाट कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम बढेर गएको हो । सरकारले दोब्बर भाडा लिनु, दुइजनाको सिटमा एक जनालाई मात्र यात्रा गराउनु, माक्स, सेनेटाइजर र आवश्यक सुरक्षाका उपायहरु अवलम्वन गर्नु भने पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनसकिरहेको छैन । बीच बाटोबाट कोचाकोच यात्रु चढाउने बानी परेका यातायात व्यवसायी र मजदूरहरुकै कारण जोखिम बढीरहेको छ भने यात्रु पनि छ महिनादेखि बन्दी जस्तै बनेका कारण गन्तब्यमा पुग्न भीडामभिड खालका नै छन् । त्यसले झन् जोखिम बढेको छ ।
अझ दशैं, तिहार, छैठ जस्ता नेपालीहरुका महान चापर्वहरु नजिकिंदै छन् । यो बेला यात्रुहरुको चाप झन् बढने अवस्था छ । यात्रुको सहज र सुरक्षित यात्राका लागि सरकारले कुनै कार्य योजना बनाएको छैन । सरकारमा बस्नेहरु त कताबाट धेरै कमिशन खान र भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर माफियाहरुकाबंगला र दरबारमा सुटुक, सुटुक पुग्नमै ब्यस्त रहेका छन् । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षमा यीनको रत्तिभर भरोसा छैन । अनि यीनलाई ती गरीब नेपाली जनताको कुनै मतलव छैन । पैसा र घुस दिनेहरुकै सेवा चाकरीमा यीनको सारा दिनरात बितिरहेको छ । सहज अवस्थामा त चाडवाडको समयमा अस्त व्यस्त हुने गरेको नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र यो कोरोनाको त्रसदीमा कसरी ब्यवस्थित रुपमा चलाउन सकिन्छ ? सरकारका तर्फबाट ठोस कार्य योजना आउन आवश्यक छ ।
आम्दानी शुन्य अवस्थामा जनताले दोब्बर भाडा तिर्न सक्दैनन् भने ब्यवसायीले पनि दुई सिटको सट्टा एकसिटमा मात्र यात्रु बोकेर सिङ्गल भाडा लिएर व्यवसाय चलाउन, टिकाउन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ चलान आदेशको तथ्यांकको आधारमा सरकारले आधा भाडाको रकम यातायात व्यवसायीलाई तिरि दिएर यो चाडबाढको मुखमा याताया सेवालाई सहज, सरल र ब्यवस्थित बनाउने कार्यमा कञ्जुस्याई गर्नु हुदैन । चाडबाड पछि भिडभाड पनि घट्दै जान्छ, छैठसम्मका लागि सरकारले व्यवसायीलाई यात्रु संख्या, चलान टिकटको तथ्यांक र अनुगमनका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएन भने यात्रुको कोचाकोचले फैलनसक्ने कोरोनाको महामारीलाई थेग्न सक्दैन । बेलैमा सबै सरोकारवालाहरुले उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाऊ । २०७७ असोज ०७ गतेको सम्पादकीय टिप्पणी ।
Previous articleकसले भन्छ यो सरकारले काम गरेन ??
Next articleआयल निगममा १८ अर्ब झ्वाम पार्ने डरलाग्दो खेल, माफियाको सेटिङमा कमरेडहरु रातारात अर्वपति
विधि कसैले नमिच
दशैं नेपालीहरुको राष्ट्रिय चाड
धेरै आलोचित बन्ने काम नगर